Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Mpanoratry ny Taona 2016: Hatolotra an'i Dafy Noely ny amboara - Gazety Taratra
Gazety Taratra, 10 Aogositra 2017
Mpanoratry ny Taona 2016: Hatolotra an'i Dafy Noely ny amboara
Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 10 Aogositra 2017, pejy 4.
Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT). Mitohy hatrany ny hetsika ho fanabeazam-boho ny teny Malagasy karakarain'io vondrona anaty tambanjotran-tserasera Facabook io. Voafidy ho Mpanoratry ny Taona 2016 i Dafy Noely.
Fantatra fa hatolotra ity mpanoratra monina any ivelan'i Madagasikara ity izay amboara mari-pamantarana maha Mpanoratry ny Taona 2016 azy izay. Hetsika hotontosaina ao amin'ny foiben'ny vaomieram-pirenena malagasy miara-miasa amin'ny UNESCO, etsy Behoririka, ny 23 Aogositra izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fiantsana ny sanganasan'i Dafy Noely, arahina feom-baliha, tafa mivantana aminy amin'izao fandalovany eto Madagasikara izao.
Maro ireo mpanoratra nametraka ny sanganasany tao amin'ny KHT. Nampiana ireo asa soratra nisongadina tamin'ireo fifaninanana nokarakarain'ity vondrona ity nandritra ny taona 2016. Naroso hofidin'ny olona izy ireny. Taorian'ny dingana roa tamin'ny fitsarana, 13 ny isan'ny voafantina. Nahazo ny laharana voalohany teo aloha'ny sanganasan'i Soamiely Andriamananjara sy ny an'i Barry Sirjon ny diampenin'i Dafy Noely.
Anisan'ny mpanoratra nametraka ny sanganasany maro indrindra ao amin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko i Dafy Noely. Maro manaraka izay ihany koa ireo nifidy ny sanganasany ka izao nisalorany ny Mpanoratry ny Taona 2016 izao.